श्रीमति माइतीमा बसेको झोकमा एक श्रीमानले यस्तो जे गरे, त्यसले संसारलाइ चकित बनायो ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
श्रीमति माइतीमा बसेको झोकमा एक श्रीमानले यस्तो जे गरे, त्यसले संसारलाइ चकित बनायो !
श्रीमती माइतीमा बसेको झोकमा एक श्रीमानले जे गरे, त्यसले सबैको होस उडाएको छ । यो घटनाले सबैलाई चकित बनाएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशको कानपुरको चकेरीमा एउटा हृदयविदारक घटना घटेको हो । त्यहाँको श्रीमतीको विच्छेदनमा, एक युवकले जे गरे त्यसपछि त्यहाँ हलचल मच्चिएको छ ।
चकेरीका अहिरवान चौकी विजय शुक्लाले दिएको जानकारी अनुसार माविया गाउँ निवासी २६ वर्षीय बीनू सविता मजदुरको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । पाँच वर्ष अघि उनको विवाह बारादेवी निवासी नेहासँग भएको थियो । उनीहरुको अढाई वर्षको छोरो आर्यन पनि छ ।